Wasiir Sacad cali Shire Oo ka HadlaySaamiga Itoobiya Laga Siiyay Dekeda Magaalada Berbera iyo Doorashada Madaxtooyada Somaliland |
Wasiir Sacad cali Shire Oo ka HadlaySaamiga Itoobiya Laga Siiyay Dekeda Magaalada Berbera iyo Doorashada Madaxtooyada Somaliland
Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Dr Sacad Cali Shire ayaa ka hadlay doorashada madaxtooyada Somaliland ee fooda inagu soo haysa,waxaana uu tilmaamay in doorashadani sharafta Somaliland kor u qaadayso,waxaana uu xusay in goob joogayaal badan oo ka kala socda Caalamku inay iman doonaan Somaliland.
Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Dr Sacad Cali Shire oo u waramay wargeyska Geeska Afrika ayaa sidoo kale ka hadlay halka uu ku danbeeyey saamigii ahaa 19% ee dalka Itoobiya laga siiyay dekeda magaalada Berbera,waxaanu yidhi isaga oo ka hadlaya doorashada.
“Inay doorashadu inoogu dhacdo si nababgalyo ah,waxay Somaliland u tahay sharaf oo sharafteena iyo magaceena ayay kor u qaadaysaa oo waxay muujinaysaa Bisayl siyaasadeed ,waxaana loo baahan yahay in halkaas laga sii wado,isla markaana la dhawro nidaamka ay guddiga doorashooyinku inoo dhigeen oo ha la ilaaliyo nidaamka iyo nabadgaliyada,iyada oo cid walba taageeraysa xisbigeeda”.
Wasiir sacad mar uu ka hadlayay beesha Caalamka iyo doorashada ayaa waxa uu yidhi
“Caalamku waxa uu indhaha aad iyo aad ugu hayaa habsami u socodka doorashada madaxtooyada Somaliland,ilaa iyo maalinta ugu danbaysa ee ay doorashadu dhacayso,inagoo maanka taas ku hayna,waa in aynu xaqiijinaa hamilada dalkeena ee ah inay doortaan madaxwaynahooda,una doortaan si ay ku jirto wadaninimo iyo adkaynta nabada”.
Wasiir Sacad Cali Shire mar uu ka hadlayey Beesha Caalamka iyo doorka ay ku leedahay doorashada Somaliland ayaa yidhi.
“Doorashadan oo kaliya maaha,ee beesha Caalamku wax wayn bay inagala qabatay doorashooyinkii hore oo dhanba,dabcan doorashadani way inagu daba dheeraatay oo dhawr jeerbaa dib loo dhigay taas oo kharashaad dheeraad ah oo aad u farabadan ay dawladeenu xambaaratay,laakiin wali Caalamku wuu ina taageeraa oo doorashada goob joogayaal badan baa ka iman doona,iyaga oo qiimayna doorashadeena hadii ALLE ka dhigana doorashadu si fiican bay inoogu dhici doontaa”.
Wasiir Sacad oo ka hadlayay doorashadii ka dhacday dalka Kenya iyo waxay Somaliland ka baratay ayaa waxa uu yidhi .
“Somaliland,Kenya oo qudha maaha ee Geeska Afrika iyo caalamka oo dhanbay tusaale u tahay oo waxaynu nahay wadan yar oo aan la ictiraafin oo ku dhaqmay nidaamka dimuqraadiga ah oo inagu soo galay Shan doorasho oo tii Lixaad isku diyaarinaya oo wali wax dhibaato ah kamay imaan,Doorashadana waa tii ugu horeysay ee Murrashaxiinta dood loo qabto,doodaasina waxay taariikh u tahay guud ahaan wadamada Afrika,sidaynu ku soconaana wa arrin kor u qaaday sumcada iyo magaca Somaliland”.
Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Dr Sacad Cali Shire mar la waydiiyay halka uu ku danbeeyey khilaafkii cakirnaa ee dekeda Berbera ayaa yidhi
“Hawshii dekedu sii fiican bay u socotaa oo doraad baan soo maray dekeda oo waan la kulmay maamulka iyo shaqaalaha, Qalab badan baa la keenay,kuwo kalena way soo socdaan,waxa jirtay in xiligii xagaagii ay ganacsatadu kala kulmeen dhibaatooyin fara badan,balse iminka dhibaatooyinkaasi waa la xaliyay oo hadda meel wanaagsan bay maraysaa”.
Mar aanu wax ka waydiinay wasiir Sacad halka uu ku danbeeyey Saamigii Itoobiya laga siiyay dekeda ayaa waxa uu ku jawaabay.
“Arrinkaasi wali wuu socdaa oo wali ma dhamaanin ,go’aan waa laga gaadhay in Itoobiya saamiga qayb laga siiyo laakiin waa qabyo oo wali ma dhamaanin.Sababta Itoobiya saamiga loo siinayaa waxa weeye inay Itoobiya tahay suuqa ugu wayn ee dekedeena isticmaali doona Insha allah,Itoobiyana waa wadan wayn oo Malaayiin qof baa ku nool,badna ma leh dekeda Jabuuti bay isticmaashaa laakiin dekedo kale ayay u baahan tahay,dekedeenu waa kamid markaas,waxaynu doonaynaa in badeecada ay doofiyaan iyo ta ay soo dhoofsanayaanba inay labaduba dekedeena soo maraan”sidaas ayuu hadalkiisa kusoo koobay Wasiir Sacad Cali Shire.